Xildhibaan ku eedeeyey Wasaaradda Arrimaha Dibadda eex iyo nin jecleysi – Kalfadhi
Xildhibaan ku eedeeyey Wasaaradda Arrimaha Dibadda eex iyo nin jecleysi
Xildhibaan Idiris Dhaqtar ayaa ku eedeeyey Hogaanka Dowladda in ay awood qeybsigii ku xadgudbeen. Waxa uu sheegay in, iyada oo, sida uu hadalka u dhigay, ay markasta beelaha Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha isku tixaan xilalka hay’adaha dowlliga ah, ay haddana Wasaaradda Arrimaha Dibadda dhawaanahaan ku tumatay awood qeybsigii qabiilka ku saleysnaa, sida uu hadalka u dhigay.
“28 qof oo waxaa noo timid Koofur Galbeed ah, oo safaaradaha dibadda laga soo uruuriyey, oo u badnaa xoghayayaal, ama safiirba ahaa, oo soo gala la dhahay wadanka – Wasiirka Arrimaha Dibadda uu dhahay saas – markey soo galeena 28-dii 28 oo laba jufo u bdan ayuu meesha geystay” ayuu yiri Xildhibaan Idiris. “Nin walba oo wasiir ah marka meesha la geeyo jufaddiisuu keensanaa” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Isagoo u warramayey Kalfadhi ayuu Xildhibaanku sheegay in dhibaatadaas uu sheeganayo darteed ay luminayaan dulqaadkii, sida uu hadalka u dhigay. “Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxa ay ku dhaqaaqday waxaan u adkeysan karno maaha” ayuu yiri Dhakhtar. Sida uu sheegay Xildhibaanku, xitaa qeybsashada awoodda hogaaminta ciidanka wey ku dulman yihiin.
“Awood qeybsigii loogu talogalay Shanta Beel maba jiro aan aaminsanahay” ayuu yiri Xildhibaan Dhakhtar. “Haddii aniga canshuur aad iga qaadeysid, deegaankiina aan aniga deganahay, aadana waxba iga siineyn, macnaha wax awood qeebsiya oo jira malaha” ayuu hadalkiisa ku daray. Waxa uu soojeediyey in ay hogaanka dalku egaan cabashadiisaas, waxna ay ka qabtaan.
Xildhibaan Jawaari: Madaxweynuhu ma xakumo Baarlamaanka iyo Garsoorka!
Xasan Sheekh Maxamuud: Haddaaney Banaadir helin metelaad siyaasadeed ma bixin karto canshuur